6 matipi ekushanda sechiitiko hostess | Kuumbwa uye kudzidza
Maite Nicuesa | 09/06/2021 20:51 | Yakagadziridzwa ku 09/06/2021 22:18 | Jobho Kubuda
Iwe unoda kushanda sechiitiko hostess? Iri ibasa rinopa mikana yakawanda yemabasa nekuti makambani anobata zviitiko zvakawanda zvekambani. Mukurovedza uye Kudzidza iwe une matipi matanhatu ekushanda sechiitiko chekutambira.
1 1. Nyora yako tangazve uye tsamba yako yekuvhavha
2 2. Chiitiko chekushandira kosi
3 3. MaAgency evatambi vechiitiko
4 4. Jobho anopa kune vanoitira zviitiko
5 5. Karenda yemitambo uye makongiresi
6 6. Gadzira rako chairo chiratidzo kuti usiyane iwe pachako
1. Nyora yako tangazve uye tsamba yako yekuvhavha
Sezvo mune chero rimwe basa, kugadzira a curriculum vitae yakasarudzika kiyi yekusimudzira kutsvaga kwebasa mune ino chikamu. Iko kudzidziswa uye ruzivo rwunotaurwa mukaramu runofanira kuenderana nechinangwa kubva kushanda sechiitiko hostess.
Ndokunge, usawedzere iwo makosi asingawedzere kukosha kune rako chairo brand. Kune zviitiko zvemarudzi akasiyana siyana. Makongiresi anowanzo kuve mumayunivhesiti. Kune rimwe divi, makambani anoitawo zviitiko zvemakambani.
2. Chiitiko chekushandira kosi
Ruzivo rwehunyanzvi rwunovhura masuo kwauri nekuti chirongwa chehunhu hunodzidzisa avo vanoda kusimudzira basa iri. Kune hunyanzvi hwakawanda uye kugona uko avo vanoita basa iri vanofanira kuratidza. Kuziva mitauro kwakakosha, nekuti, semuenzaniso, vamwe vevanoenda kuchiitiko vanogona kutaura Chirungu, ChiFrench kana ChiGerman. Unyanzvi hwemagariro hunoratidzawo kugona kwehunyanzvi yeavo vanopa rakaringana vatengi.
3. MaAgency evatambi vechiitiko
Kune mapurojekiti akasarudzika muchikamu chino. MaAgency ayo anoshanda pamwechete muchirongwa chezviitiko zvakasiyana uye kwaunogona kutumira CV yako kutumira tsamba yako yekuvhavha. Kuburikidza neInternet unogona kuwana ruzivo nezve akasiyana ejensi. Tarisa webhusaiti uye pasocial network zveimwe purojekiti. Kana iwe uine chero mibvunzo yaungade kujekesa, taura nesangano kuburikidza nenzira dzakapihwa chinangwa ichi pawebsite ye agency.
4. Jobho anopa kune vanoitira zviitiko
Basa repamhepo rinopa nzvimbo yakakosha mukutsvaga basa. Kuburikidza nekubvunzana kazhinji kweaya ma online chiteshi iwe unogona kuwana zvakasarudzika kushambadza. Ipapo, verenga kushambadza zvakanyatsonaka kuti uwane ruzivo rwebasa uye izvo zvinodiwa zvinofanirwa kuzadzikiswa neavo vanozviratidza pachavo kune yakasarudzwa maitiro.
5. Karenda yemitambo uye makongiresi
Kana iwe uchida kushanda semubati wechiitiko, zvinokurudzirwa kuti iwe uziviswe nezve zviitiko zvakakosha zvikuru zvinoitika mukati megore rose. Unogona kuwana zviitiko mumaguta akasiyana. Chii chinodaidza chiito? Iwe unogona tumira yako tangazve kuitira kuti vagone kutora yako mbiri mukutarisa mune ramangwana mhemberero.
Networking ndiyo kiyi yekutsvaga basa nhasi. Izvo zvakare zvinobatsira kuti usvike kubasa sechiitiko chekutambira, nekuti mamwe matarenda ari chikamu chenetiweki yako yekutaurirana anogona zvakare kukuzivisa iwe nezve misoro ine chekuita nebasa iri
Kuenda kumhando dzezviitiko izvi kunogona kukubatsira kuti unzwisise zvirinani basa remubati wechiitiko. Zano revanyanzvi iri rakakosha nekuti vanopa kurapwa kwepedyo kune varipo.
6. Gadzira rako chairo chiratidzo kuti usiyane iwe pachako
Iwe unovaka zita rako pachako kupfuura rako rekutanga. Iwe unotaurirana hunyanzvi hwako kuburikidza nehunhu hwako. Kubata nguva kuratidzwa kwemutoro kune avo vanoshanda sechiitiko chekuchengetedza imba. Zvinokurudzirwa zvakare kuti chimiro ichi chine chido chekushanda sechikwata. Shandira pamwe pamapurojekiti nevamwe vadzidzisi vanoita kuti kongiresi ibudirire.
Kunze kwekutora kosi yekushanda sechiitiko chekutambira, iwe unogona zvakare kutora chikamu mumusangano wekutaura pamberi pevanhu. Nenzira iyi, iwe unowana hunyanzvi nyowani, zviwanikwa uye kugona izvo zvinokubatsira iwe kusimudzira yako yakanaka vhezheni.
Ndeapi mamwe mazano iwe aunoda kugovera muKudzidzisa uye Zvidzidzo kuti uwane ichi chinangwa chehunyanzvi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » Studies » Jobho Kubuda » 6 matipi ekushanda sechiitiko hostess